โครงการบ้านฟ้านาวี ในStyleท่ามกลางธรรมชาติ | DDHomeLand
โดย ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 13 ส.ค. 2551.
โครงการบ้านฟ้านาวี ในStyleท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาโอบล้อม ดื่มด่ำกับบรรยายกาศเย็นสบายชวนน่าหลงใหล บนเนื้อที่ 80 ตรว. พร้อมด้วยโครงการที่กว้างขวาง อาทิ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สโมสร และสาธารณูโภคต่างๆ อย่างครบครัน มีให้เลือก 3แบบ คือ 1.บ้านเคียงฟ้า บ้านชั้นครึ่ง 3ห้องนอน3ห้องน้ำ ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มีอ่างอาบน้ำพร้อมน้ำร้อน-เย็น ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น พร้อมโรงจอดรถ บนพื้นที่ใช้สอย 140 ตรม. 2.บ้านขวัญฟ้า บ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน3ห้องน้ำ ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มีอ่างอาบน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก พร้อมโรงจอดรถ บนพื้นที่ใช้สอย 115 ตรม. 3.บ้นชมฟ้า บ้านชั้นเดียว 2ห้องนอน2ห้องน้ำ พร้อมด้วยห้องครัว ห้องรับแขก โรงจอดรถ บนพื้นที่ใช้สอย 100 ตรม. ตั้งแต่ราคา 1,900,000 - 2,600,000 บาท
ทำเลที่ตั้งโครงการ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทะเลบางแสน พัทยา ไร่องุ่น ฯลฯ
คำค้น: ကမ္ဘာကျော်ရတနာဝင်းထိန် | စောက်ဖုတ်ရုပ်ပြ | ကမ္ဘာကျော်ရတနာဝင်းထိန်၏အောစာအုပ်များ | ​ဒေါက်​တာရမ်းကု | အပြင်းပြေ အောစာအုပ်များ | hnhhမြန်မာ | အောစာအုပ်များ | မြန်မာ အပြင်းပြေ အောစာအုပ်များ | အပျို စောက်ဖုတ်ရုပ်ပြ | ဇွန်သင်ဇာ ပုံများ |
myanmar 18+ကာတွန်း မြန်​မာ​အောစာအာပ်​ မြန်​မာ​အောစာအာပ်​ လိုး အားအ ကြီးမေ အောရုပ်ပြ မြန်​မာ​အောစာအာပ်​ မြန်​မာ​အောစာအာပ်​ လိုး အားအ ကြီးမေ အောရုပ်ပြ ကြီးမေ အောရုပ်ပြ မြန်မာအောစာအုပ် 2008 စောက် ပတ် လီး ကြီးမေ အောရုပ်ပြ မြန်မာအောစာအုပ် 2008 စောက် ပတ် လီး အပြာစာအုပ် 201 အပြာစာအုပ် 201 အဖုတ်​ပုံ အဖုတ်​ပုံ ဆယ်​​ကျော်​သက်​​လေးများ အောစာအုပ် ၂၀၀၅ အောစာအုပ် ၂၀၀၅ ကာမသုခ​အောစာအုပ်​များ ကာမသုခ​အောစာအုပ်​များ ဇော်ကြီးPDF ကာမသုခ​အောစာအုပ်​များ ကာမသုခ​အောစာအုပ်​များ ဇော်ကြီးPDF အဖုတ်​ယားသူ မြန်မာ အိုး အဖုတ်​ယားသူ မြန်မာ အိုး ​စောက်​ဖုတ်​လှလှ​လေး ​ဂျန်​ပန်​အပြာ​အောကား ​စောက်​ဖုတ်​လှလှ​လေး ​ဂျန်​ပန်​အပြာ​အောကား မြန်မာစာတန်းထိုး​အောကားများ ပါကင်​လိုကား မြန်မာစာတန်းထိုး​အောကားများ ပါကင်​လိုကား